हे दैब : कोरोनाबाट अमेरिकामा एकै परिवारका ४ जनाको मृत्यु ! «
Published : 21 March, 2020 8:54 pm
अमेरिकामा कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को कारण एकै परिवारका चार जनाको ज्यान गएको छ । अमेरिकाको न्यूजर्सी राज्यमा ग्रेस फुस्को नाम गरेकी ७३ वषर्ीया महिला र छ वयस्क छोराछोरी एक पारिवारिक भेलामा सहभागी भएर फर्किएपछि कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएका थिए ।
परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ भने तीनजना अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । करिब २० जनाभन्दा धेरै आफन्त होम क्वारेन्टाइनमा छन् । अमेरिकामा कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या लगातार बढिरहेको छ । त्यसैले विशेषज्ञहरुले कुनै पनि किसिमको सामाजिक भेलामा सहभागी नहुने मानिसहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।
न्यूजर्सीमा ज्यान गुमाउनेमा ग्रेस फुस्कोसहित उनकादुई छोरा र एक छोरी छन् । दुई छोराहरु कार्मेन फुस्को र भिन्सेन्ट फुस्को तथा एक छोरी रिताफुस्को-ज्याक्सनको ज्यान कोभिड-१९ को कारण गएको हो ।
परिवारका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार अन्य १९ जना अहिले होम आइसोलेशनमा बसेका छन् । उनीहरु आफूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको वा नरहेको भन्ने कुराको नतिजा कुरिरहेका छन् ।
परिवारका सदस्यहरुले भने मुलुकमा सेलिब्रेटीहरुलाई कुनै लक्षण नदेखिए पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र आफूहरुको परिवारका सबै सदस्य बिरामी हुँदा पनि राम्रो उपचार नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
अहिलेसम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण २७६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या पनि १९ हजार कटिसकेको छ । अमेरिकाको सबै राज्यमा यो भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । अहिले धेरै अमेरिकी शहरहरु लकडाउन गरिएको छ ।
सेती अस्पतालमा को’रोना भाईरस परीक्षण गरिएका ६५ जनामध्ये ४ जनामा मात्रै ‘पोजेटिभ’ रिपोर्ट
सेती प्रदेशिक अस्पताल कैलालीमा को’रोना भाईरस परीक्षण गरिएका ६५ जनामध्ये ४ जनामा मात्रै पोजिटिभ रिपोर्ट
कोरोनाका कारण कक्षा ११ र १२ को परीक्षा पनि स्थगित !
सरकारले वैशाखमा हुने भनिएका कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा पनि स्थगित गरेको छ
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई र आगामी बैशाखमा हुने कक्षा १२ को परीक्षा सँगै गर्न सकिने
छोटो फिल्म ‘ओयजा’ को टिजर सार्वजनिक….(हेर्नुहोस ट्रेलर)
रेज इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति छोटो हरर फिल्म “ओयजा” को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । रोशन दाशको
संघीय संसदमा राखियो नयाँ नक्सासहितको लोगो
काठमाडौं । संघीय संसदमा नेपालको नयाँ नक्सासहितको लोगो राखिएको छ ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा लिम्पियाधुरा,
भारतमा कोरोना संक्रमित १ लाख ४५ हजार नाघयो
काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या एक लाख ४५ हजार नाघेको
खाएर मात्रै के बस्नु क्वारेन्टाइनमा भन्दै क्वारेन्टाईनमा बसेका युवाले